Dalhousie University - Study in Canada. Waxbarashada sare Abroad
Dalhousie University Details
City : Sexton
gaabinta : ka
aasaasay : 1818
Ardayda (qiyaastii.) : 20000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University Dalhousie
Qor at University Dalhousie
Dalhousie University (ka) waa jaamacad cilmi dadweynaha ee Nova Scotia, Canada, saddex xarumood ee Halifax, iyo kan afraad ah in Kitaabka Quduuska ah Hill. Dalhousie bixisaa in ka badan 4,000 koorsooyin iyo 180 Barnaamijyada degree in laba iyo toban undergraduate, graduate, iyo Caqlina xirfadeed. jaamacad waa xubin ka mid ah U15 ee, koox ka mid ah jaamacadaha cilmi-degdeg ah ee Kanada.
Dalhousie la aasaasay sida kulliyad nonsectarian in 1818 by Lieutenant Guddoomiyaha eponymous of Nova Scotia, George Ramsay, 9th Earl of Dalhousie. college ma uusan qaban ay fasalka kowaad ilaa 1838, ilaa markaas ka hawlgala baahsan ay sabab u tahay dhibaatooyinka dhaqaale. Waxaa dib loo furay muddo saddexaad ee 1863 ka dib habeynta a keenay isbedel of Magacaaga “Taliyayaashii Dalhousie College oo University”. Jaamacadda ayaa si rasmi ah magaceeda ilaa bedelay “Dalhousie University” in 1997 iyada oo sharciyada gobolka, sharciga isla biireen hay'ad la Technical University of Nova Scotia.
Qalinjabiyeyaasha caan ah jaamacadda waxaa ka mid ah a guusha Nobel Prize, laba Ra'iisul Wasaaraha Canada, laba guuleysatay Herzberg Prize, NASAastronaut oo ahaa gabadhii ugu horeysay American inaad ku socotaan ka bannaan, 89 Rhodes Culimada, iyo kala duwan oo ka mid ah saraakiisha dowladda ee kale top, aqoonyahano, iyo hoggaamiyayaasha ganacsiga. Jaamacadda kaalinta 235th ee 2014 QS qiimeynta University Adduunka, 226-250th ee 2014-2015 Tacliinta Sare Times qiimeynta University Adduunka, iyo 201-300th ee 2014 Ciidmada Academic of Jaamacadaha Adduunka.Dalhousie waa xarun cilmi badda, oo waa ciidankii in xarunta dhexe ee Tracking Ocean Network.
Nidaamka Maktabadda Dalhousie wuxuu ku shaqeeyaa maktabada ugu weyn ee Atlantic Canada, iyo heysta ururinta ugu weyn ee wax khayraadka beeraha ee gobolka. Jaamacadda shaqeeya wadar ahaan toban guryaha. Waxaa hadda jira laba urur arday u taagan danaha ardayda jaamacadda: Dalhousie Midowga Ardayda iyo Association Dalhousie ee Ardayda Graduate. Kooxaha Iyi Dalhousie ee, Tigers, tartami ee shirka Atlantic University Sport of Canadian Interuniversity Sport. Dalhousie ee Kuliyada kooxaha Iyi Beeraha waxaa loo yaqaan wan Dalhousie ah, oo la tartami ee ACAA iyo CCAA. Dalhousie waa jaamacad labada jinsi dhigtaan in ka badan 18,000 ardayda iyo 110,000 Qalinjabiyeyaasha.
Naqshadaha Dhismaha iyo Qorsheynta
Arts iyo cilmiga bulshada
Waxaan ku faani our ee la soo dhaafay iyo kalsooni ah ee mustaqbalka. aasaasay sannadkii 1818, Dalhousie ayaa bixinta waxbarasho gaar ah muddo ku dhow 200 sano. Iyadoo dheer ee naga Campus Beeraha ee 2012, our gaari sii balaarineysa ka baxsan Halifax iyo qaybaha kale ee gobolka.
Qarnigii hore 19, George Ramsay, Earl sagaalaad Dalhousie iyo Nova Scotia Lieutenant-Guddoomiyaha waqtiga, doonayay in la dhiso jaamacad Halifax ah u furan yahay dhammaan, iyadoo aan loo eegin fasalka ama caqiido.
The hadhaagii dagaalka ka caawiyay fuliyaan riyadiisii. Inta lagu jiro dagaalkii of 1812, Castine, Dekedda yar ee Maine, waxaa loo isticmaalay sidii saldhig by privateers Maraykan ah dhibaataysnaayeen maraakiibta ay weheliyaan diilinta Eastern. Britain ah oo xoog Royal Navy ka Halifax diray in ay qabsadaan Castine oo u celi galay dekedda caadooyinkii galo a. Markii uu dagaalku dhamaaday, ciidamada badda si ay u Halifax laabtay lacagta u soo ururiyay sida kastamka. Sayidow Dalhousie maal 7,000 pounds maalka sida hibeynta ah kulliyadda iyo iska 3,000 ginni ee ay dhismaha. Earl The qaabeeyey kulliyadda yare e ka dib markii University of Edinburgh, dhow gurigiisa Scottish.
ka dib markii ay college waxaa la aasaasay bishii 1818, Sayidow Dalhousie loo magacaabay Governor General of Canada oo ka tagay Halifax. Aan saamaynta uu, hay'adda fashilmeen. Waxbarashadu waxay hore aan ku bixiyeen ilaa 1838. Its hawlgalka ahaa go'aysa oo kaliya iyo darajo loo dhigin in muddo ah.
Ku dhowaad 50 sano ka dib markii ay bilowgii, college la habayn. In 1863, Dalhousie furay iyadoo lix Professor iyo mid barahaaga. The darajo marka hore la siiyay in 1866. Jirku wuxuu ardayga in sanad ka koobnaa 28 ardayda u shaqeeya digrii iyo 28 ardayda marmar.
Money waxa ay dhibaato ah hay'ad cusub. In 1879, waxay u muuqatay in kastoo jaamacadda ku guuldareysato laga yaabaa in ilaa George Munro, a New York publisher qani ah oo leh xididdada Nova Scotia, bilaabay deeqday jaamacadda. Muddo sanado ah, uu ka qayb qaatay shan professorships cilmi iyo wax ku saabsan $83,000 in iyoshaqo iyo bandhigyo. In 1999, qiimaha hadiyado kuwaas oo lagu qiyaasay in ay ka qiimo badan tahay $8 million. Waayo badbaadinayo jaamacad ka soo xiro, fasax ah jaamacad gaar ah, George Maalinta Munro, ayaa lagu arkay Jimcaha ugu horeeya ee Febraayo. Tan iyo markii uu hadiyad, dhaqan karaameeyey, deeq waaweyn iyo kuwo yaryar, ayaa abuuray jaamacadda kobcaya ee maanta.
goobta asalka ah ee kulliyadda ahaa ku Grand Parade, magaalada Halifax meesha Hall City ee u taagan. In 1886, jaamacadda u dhaqaaqay ah Forrest Building on maanta campus Carleton iyo faafin si tartiib tartiib ah ku fadhiisato Studley Campus.
Qarnigii 20aad, Dalhousie si tartiib ah u koray. On April 1, 1997, Dalhousie fujiyo la Technical University of Nova Scotia (TUNS), jaamacad kale oo ku salaysan Halifax, Xoojinta awoodda jaamacadaha si ay u sahamiyaan teknoolajiyada cusub dhaqmo. Tani waxaa ka mid ahaa Kulliyadda cusub abuuray of Science Computer. Magaca hay'adda fujiyo sii University Dalhousie.
Xilligii casri ah
Dalhousie joogto ah u koraya. Shaqaalaha Dhismaha ayaa hortiisa u soo noqnoqda ee Studley Campus. goobaha New sanadihii la soo dhaafay waxaa ka mid ah Marion McCain Arts iyo Social Science Building, ka furmay 2001, ah Kenneth C. Rowe Management Building, si rasmi ah soo bandhigay in 2005, ahMona Campbell Building, furay dayrta 2010, oo cusub ah Ocean Sciences Building, furay June 2013. The Intaa waxaa dheer ugu dambeeyey waa LeMarchant Place, guriga in ka badan 300 ardayda iyo adeegyo kala duwan oo arday, kaas oo ka furmay September 2014.
At xafladaha shir bishii October 2006, Dalhousie dhaafay 100,000 qalin. guul ayaa yimid 140 sano ka dib Dalhousie abaalmariyey ay laba Bachelor hore ee darajo Arts Yuusuf Henry Chase iyo Robert Shaw in 1866. Margaret Florence Newcombe ahaa haweenaydii ugu horraysay si ay u qalin, la BA ah 1885, iyo graduate horeysay sharciga madow, James Robinson Johnston, qalin ku 1896.
On September 1, 2012, Dalhousie galay marxalad kale oo xiiso leh. Jaamacadda fujiyo la Nova Scotia Beeraha College (NSAC) in Truro-hadda ku Kuliyada Beeraha awood-soo dhaweeyo, shaqaalaha iyo ku dhawaad 1,000 ardayda cusub galay qoyska Dalhousie ah.
Ma rabtaa wada hadlaan University Dalhousie ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
University Dalhousie on Map
Photos: Dalhousie University rasmiga ah Facebook
dib u eegista University Dalhousie
Ku biir si ay ugala hadlaan of University Dalhousie.
Memorial University of Newfoundland St. Yooxanaa